Ismaaciil Cumar Geelle iyo Xukun jacelka | KEYDMEDIA ONLINE
Xukun jacaylka Geelle oo hortagan nidaamka dimoqraadiga Jabuuti
Ismaaciil Cumar Geelle, Madaxweynaha dalka Jabuuti, ayaa todobaadkaan ku dhawaaqay in uu markii shanaad yahay musharax u taaggan xilka madaxweynaha. Hadaba, Xukun jacaylka Geelle ma noqon kartaa mid kahor taagan nidaamka dimoqraadiga Jabuuti.
JABUUTI - Mudo 21 sano ah waxaa xukunka Jabuuti iska haysta sidii boqortooyo aan dhixin Ismaaciil Cumar Geelle, oo markii horeba xukunka kala wareegay abtigiisa marxuum Xasan Guuleed Abtidoon sanadkii 1999.
Abtidoon oo dhintay 21 November 2006 isagoo 90 jir ah, ayaa noqday Madaxweynihii ugu horeeyay Jabuuti kadib xoriyadda markii uu dalka ka qaatey gumeystihii Faransiiska sanadkii 1977.
Geelle wuuxuu horaanta 2021 isku soo sharaxay markii 5aad xilka Madaxweynaha, si uu kursiga isaga sii fadhiyo, illaa geeridiisa. Dad badan ayaa ku eedeeyay Geelle inuu afduubay dimoqraadiyadda dalka.
Xili kasta wuxuu Geelle keensadaa Musharixiin maqaarsaar ah, oo kaliya uu doonayo inuu ku xalaaleysto doorashadda, maadaama siyaasiyiintii Mucaaradkii ay dalka ka carareen, sababo la xirrira amnigooda.
Dalkan yar ee Geeska Afrika ayaa leh ahmiyad istaraatiiji, iyadoo uu martigaliyo saldhigga kaliya ee milateri oo ay leeyihiin reer galbeedka, sida Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka iyo dalka Shiinaha.
Doorashadda Jabuuti ayaa leh hal ku dhig la magac baxay “Nin dooran oo la dooranayo”, maadaama hal qof guuleysto, isagoo aan lala tartamin. Dadka reer Jabuuti waxay sheegeen in dimoqraadiyad ay ka quursadeen inta uu Geelle nool yahay.
Sanadkan 2020, gobolka Geeska Afrika doorashooyinkiisa wa la afduubay, waxay u dhici waayeen sidii loogu tala-galay, waxayna diideen madaxda xukunka haysata, Farmaajo, Abiy Axmed iyo Geelle inay kursiga ka degaan.
Itoobiya, Abiy Axmed waxuu mudo-xileedkiisa dastuuriga ku ekaa August 2020, mana uusan qaban doorashadda dalkiisa, sidoo kale Farmaajo waxaa laga sugayay Nov 2020 inuu billaabo doorashadda Baarlamaanka oo ku xigi lahayd Feb 2021 mida Madaxweynaha, mana sameynin wixii laga filayay.
Ismaaciil Cumar Geelle doorashadda dalkiisa waa mid cidba ka daba hadlaynin, oo siduu doono ka fasho. Astaamaha kaligii-taliska waxaa kamida inuu burburiyo nidaamka dimoqraadiga isaga lagu soo doortay.